August 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Aug 31, 2016 0
Warka Duhur waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose. HALKAN GUJI OO LA DEG WARKA DUHUR.
Madixii hore ee Sirdoonka Yahuudda oo sheegay in Yahuuddu cagta saareen Dhabbihii Burburka.
Axmad	 Aug 31, 2016 0
Iyadoo maamulka Yahuudda ee xooga ku heysta dhulka Muslimiinta ee Filastiin uu yahay maamul gacan ku rimis ah oo ay aas-aaseen dowladaha Reer Galbeedka ayaa hadana waxaa Siyaasiyiinta Yahuuddu rajo xumo baahsan ka muujinayaan jiritaanka…
Soomaalida dibadaha dalkeygii hoog baa ka jira dhaha ayaa lagu yiraahdaa.
Soomaali fara badan ayaa dhowr iyo laabtankii sano ee la soo dhaafay tahriib ku gashay wadamada reer galbeedka halka kuwo kalena weli dariiqaas in ay maraan ku haminayaan. Marka qofka soomaaliga ahu ka tago dalka ee uu gaaro wadamada…
Aqoon yahan ka ka hadlay isbedelada soomaalidu soo martay shanti boqol ee sano ee u dambeysay
Soomaaliya waxay leedahay cadaw fara badan oo ku fikiraya in uu maalin cirib tiro iyadoo mar waliba ay kacayeen qolo shisheeyaha dagaal la gasha ha noqdo mid jihaad ah oo diineed ama ha noqdo mid wadaniyad ku saleysane. Shanti boqol ee…
Si aad udhagaysato qodobada saaka lagu soo qaatay warka subax guji Linkiga Hoose. HALKAAN KA DHAGEYSO WARKA SUBAX
guuleed	 Aug 30, 2016 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Dhageyso Dhuuxa…
Dhageyso:Sheekh Cali Dheere oo Ka Hadlay Howlgalkii SYL.
Kalimad soconaysa qadar 10 Daqiiqo ah ayaa goor dhaw la baahiyay ,waxaana jeedinaya Afhayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raagge. Mujaahid katirsan Xarakada Alshabaab ayuu Sheekh Cali sheegay inuu…
Axmad	 Aug 30, 2016 0
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weerarkii barqinimadii maanta Guutada Istish-haadiyiinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaaday hotel SYL oo ku yaala meel u dhow xarunta madaxtooyada dowladda Federaalka, waxaana dadka…
Warka Duhurnimo ee Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa lagu soo qaatay wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Halkan ka dhagayso War Duhur 30-8-2016
Weerar xoogan oo goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho.
Axmad	 Aug 30, 2016 4
Daqiiqado kahor waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weerar xoogan oo ahaa Camaliyad Istish-haadi ah kaas oo lagu weeraray Hotelka SYL ee u dhow xarunta Madaxtooyada dowladda Federaalka. Weerarka waxaa la sheegay in loo adeegsaday…